Gareen ABO Jen. Kamaal Galachuun hoogganamu maqaa haarawa moggaafate - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Gareen ABO Jen. Kamaal Galachuun hoogganamu maqaa haarawa moggaafate
ABO'n Jijjiiramaa gara Kallacha Walabummaa Oromiyaatti (KWO) kan ufjijjiire
Gareen ABO Jeneraal Kamaal Galchuun hoogganamu (ABO’n Jijjiiramaa) maqaa haarawa moggaafachuu isaa ibsa baaseen ifa godheera. Gareen kuni maqaa Kallacha Walabummaa Oromiyaa (KWO) jedhee kan ufmoggaase kora dhaabichaa Adoolessa 30 – 31 Ameerikaa magaalaa Minisotaatti geggeeffateen ta’uus labseera. Gareen ABO Jijjiiramaa jijjiirraan maqaa dhaabichaa ammatti kan barbaachiseef Qabsoo Bilisummaa Oromoo kufaatiifi bacancara irraa dandamachiisuuf ta’uu ibsa isaa keessatti tuqeera.
Dhaabbanni KWO kallattiin qabsoo isaa saba Oromoo bilisoomsuufi walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu ta’uus jala sarareera. Kanas kan dhugoomsu, akka ibsi ijjannoo KWO agarsiisutti, daandii qabsoo siyaasaafi qawweetti dhimma bayuudhaan.
Kallachi Walabummaa Oromiyaa ibsa ijjannoo baase keessatti mootummaan Itoophiyaa bulchaa jiru heeraafi seera akka kabaju gaafatee, akkasumas hidhamtoonni siyaasaa hundi haal-duree tokko malee gadi lakkifamuu qaban jedheera.
Ummanni Oromoo hundis tokkummaan ka’ee mirgaafi haqa isaa akka kabajsiifatuuf KWO’n waamicha godheera. Oromoon bilisummaa isaafi walabummaa biyya isaatiif qabsaayuu ykn socho’uu qabas jedheera. Kallattiin qabsoo Oromoo Oromoofi jaarmayaalee Oromoo jiddutti osoo hintaane kan diina irratti fuulleffate ta’uun akka irra jiru KWO’n hubachiiseera.
Jaarmayaan Jeneraal Kamaaliin hoogganamu barbaachisummaa maqaa haarawaa eeruun alatti, maqaan haarofni Kallacha Walabummaa Oromiyaa jedhu kuni qabsoo bilisummaa funduratti tankaarfachiisuu irratti gummaacha maal akka qabaachuu malu ykn shoora maal akka taphachuu danda’u wonti ifatti kaaye hinjiru.
Addi Bilisummaa Oromoo Jijjiiramaa kana dura Itoophiyaa ol’aantummaan seeraafi dimokraasii keessatti kabajame keessatti mirgi Oromoo nikabajama dantaan Oromoos nitikfama amantaa jedhu qabaataa ture. Kan qabsaayuufis Oromiyaa walabaa uumuuf osoo hintaane Itoophiyaa federeshiiniin dhugaa keessatti mirkanaaye; kan mirgi Oromoofi saboota hundaa keessatti kabajamu uumuuf ta’uu irra deddeebi’ee ibsaa ture. Amma garuu ibsa dhaabichaa irraa kan hubatamu jijjiirraa maqaa qofo osoo hintaane dhaabbanni kuni jijjiirraa kaayoos fiduu isaati; Oromiyaa walaba uumuuf kan qabsaayu. Gama biraatiin, alaabaafi asxaan dhaabichaa geeddaramuuf dhabuu isaa wanti ibsi KWO akeeke tokko hinjiru. Kan ibsa ijjannoo KWO irraa hubatamu jijjiirraan maqaafi kaayoo kuni gara jijjiirraa sagantaa siyaasa dhaabichaatti geessuun isaa waan hinoolle ta’uu isaati.
Kallacha Walabummaa Oromiyaa
Previous articleDr. Merera Gudina Urges Barack Obama to Keep Up Pressure on Ethiopian Government
Next articleManni murtii Itoophiyaa hoogganoota Muslimaa irratti adabbii woggaa 7 hanga 22 dabarse